Bit By Bit - Kugadzira kubatana kukuru - 5.5.6 Purani zano
Mukuwedzera kune aya mashanu mazano ekugadzirisa mazano, ndinoda kupa mamwe mazano maviri ezano. Chokutanga, kupindura nokukurumidza kwaungasangana nako paunenge uchitaura nezvekushanda pamwe chete "hakuna munhu angatora chikamu." Zvechokwadi izvi zvingava zvechokwadi. Kutaura zvazviri, kusava nekutora chikamu ndicho chinonyanya kukonzera kuti mishandirapamwe yakawanda yokubatana inotarisana. Zvisinei, kurwisana uku kunowanzobva pakufunga nezvemamiriro ezvinhu nenzira isiri iyo. Vanhu vazhinji vanotanga nevari voga vozobuda: "Ini ndakabatikana; Handidi kuita izvozvo. Uye ini handizivi ani zvake aizoita izvozvo. Saka, hapana munhu aizoita izvozvo. "Panzvimbo pokutanga newe pachako nekushanda kunze, iwe unofanira kutanga nehuwandu hwevanhu vanobatana neInternet uye vashandire. Kana chete muine mamiriyoni evanhu ava vanotora chikamu, zvino chirongwa chako inogona kubudirira. Asi, kana munhu mumwe chete muvanhu bhiriyoni achibatana, zvino purojekiti yako ingangove yakakundikana. Sezvo isu tisinganzwisisi zvakanaka hazvisi zvakanaka kusiyanisa pakati pe-in-mamiriyoni uye imwe-in-a-bhiriyoni, tinofanirwa kubvuma kuti zvakaoma kuziva kana mapurojekiti achaita kuti pave nekubatanidzwa kwakakwana.
Kuti tiite izvi zvishoma zvakanyanya, ngatidzokere kuGalaxy Zoo. Chimbofungidzira Kevin Schawinski naChris Linton, nyanzvi mbiri dzenyeredzi dzakagara mumasangano muOxford vachifunga nezveGalaxy Zoo. Vangadai vasina kumbofungidzira-uye havangambofungi-kuti Aida Berges, amai vekugara-kumba-vanogara muPuerto Rico, vaizoguma vachienzanisa mazana emagalasi pavhiki (Masters 2009) . Kana kuti funga nyaya yaDavid Baker, nyanzvi yemasikirwo ari kushanda muSeattle achigadzira Foldit. Akange asingambofungi kuti mumwe munhu aibva kuMcKinney, Texas ainzi Scott "Boots" Zaccanelli, uyo aishanda masikati semutengi wefekitari yemagetsi, aizotora manheru ake kupeta mapuroteni, pakupedzisira achikwira kusvika pane nhamba nhanhatu paFoldit, uye kuti Zaccaenlli aizouya, kuburikidza nemutambo, ape chigadziro chekusiyana zvakasimba kwe fibronectin iyo Baker neboka rake vakawana vachivimbisa kuti vakasarudza kuigadzira mubazi ravo (Hand 2010) . Zvechokwadi, Aida Berges naScott Zaccanelli vane maatypiki, asi iyo ndiyo simba reInternet: nemabhiriyoni evanhu, zvinowanzoita kuti vawane maitiro.
Chechipiri, kupa dambudziko iri nekufungidzira kubatanidzwa, ndinoda kukuyeuchidza kuti kugadzira basa rekubatana pamwe chete kunogona kuva nengozi. Iwe unogona kuisa mari yakawanda yekuvaka sarudzo iyo pasina munhu angada kushandisa. Semuenzaniso, Edward Castronova-muongorori anotungamira mundima yehupfumi hwezvisikwa zvenyika, akashongedzerwa ne $ 250,000 kubva kuMacArthur Foundation, uye akatsigirwa neboka revatadzi-vakapedza makore anoda kusvika maviri vachiedza kuvaka nyika chaiyo mukati mavo inogona kutungamirira kuongororwa kwezvemari. Pakupedzisira, kushanda kwose kwaiva kukundikana nokuti hapana munhu aida kutamba munyika yeCastonova yenyika; hazvina kunyanya kufadza (Baker 2008) .
Zvichipa kusava nechokwadi pamusoro pekubatanidzwa, izvo zvakaoma kupedza, ndinokurudzira kuti iwe uedze kushandisa maitiro akaoma ekutanga-up (Blank 2013) : edza zviratidzo zvakajeka uchishandisa purogiramu ye-shelf uye ona kana iwe unogona kuratidza hutano usati waita mari yekodhi software development. Mune mamwe mazwi, paunotanga kuongororwa kwepamberi, purojekiti yako haifaniri-uye haifaniri-inotarisa yakarongedzwa seGalaxy Zoo kana eBird. Aya mapurisa, sezvavari ikozvino, ndiwo matambudziko emakore ekuedza nemapoka makuru. Kana iwe purojekiti yako ikakundikana-uye iyo ichokwadi chaiyo-iwe unoda kukundikana nokukurumidza.